I-Podcast 10x12: Ngabahlobo okanye ziintshaba? | IPhone iindaba
Kule veki sithethe ngobudlelwane obufunyenwe nguApple kunye nezinye iinkampani ezinkulu zobuchwephesha. Ngubani owayengomnye wabadibaniselwano bayo abaphambili, umenzi wamacandelo amaninzi ezixhobo zakhe, Ngoku iQualcomm iye yaba yenye yeentshaba zayo ezinkulu ezinamatyala asemthethweni kunye nokuthintela ukuthengiswa kwe-iPhone e-China.. IAmazon, eyayikukhuphiswano lwayo olukhulu, ngoku ingumlingani omkhulu oya kuba neApple Music kwiiAmazon Echos zayo. Iintshaba okanye abahlobo? Kuxhomekeke kumzuzu. Oku kunye nezinye iindaba kule veki kwi-Actualidad iPhone podcast.
Njengoko besele siqalile kwisizini ephelileyo, kulo nyaka i-Actualidad iPhone podcast inokulandelwa ngqo ngejelo lethu le-YouTube kwaye ithathe inxaxheba kuyo ngengxoxo neqela lePodcast kunye nabanye ababukeli. Bhalisa kwisitishi sethu ukufumana izaziso zokuba ukuqala kokurekhodwa kwe-podcast, kunye naxa sidibanisa ezinye iividiyo esizipapasha kuyo. Ewe iya kuhlala ikho kwi-iTunes ukuze ukwazi ukuyimamela xa ufuna ukusebenzisa isicelo sakho osithandayo sePodcasts.. Sicebisa ukuba wena Rhuma kwi iTunes okanye ngaphakathi Spotifyukuze iziqendu zikhutshelwe ngokuzenzekelayo zakuba nje zifumaneka. Ngaba uyafuna ukuyiva apha? Kulungile nje ngezantsi ukuba umdlali uyayenza. Sikwanayo Uluhlu lokudlala kwiApple Music Ngomculo odlala kwipodcast (ewe, sinayo nayo Spotify...).
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » podcast » I-10x12 Podcast: Ngabahlobo okanye ziintshaba?
I-Apple iyathintelwa ekuthengiseni ii-iPhones e-China
I-Coommand kunye neNqoqo yokulwa, isicwangciso kunye nokuhlaselwa ukuze ujabulele kwi-iOS